Wasiirkii Hore ee Gaashaandhiga oo si xiiso leh loogu soo dhaweeyey Minnesota
Ali Muse Alixzaan Masjid Al-Taqwa Daarulcilimi Somali Sunah naseexo Baro Quraanka maQal iyo muQaal Cilmi Sh Maxamed Cabdi Umal addacwah Somali Quraan Qubacentre Boqolsoon Hanuun Aflax Wasiirkii Hore ee Gaashaandhiga oo si xiiso leh loogu soo dhaweeyey Minnesota
Wasiirkii hore ee Gaashaandhiga haddana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Mr. Xuseen Carab Ciise ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Minneapolis. Wasiirka oo qurbajoogta Soomaaliyeed ee ku nool Minnesota ay ku sharfeen xaflad loogu mahadcelinayay shaqadii uu ka soo qabtay Soomaaliya xilli kala guur ah oo aan Soomaaliya mustaqbalkeeda la hubin. Waxaa la gudoonsiiyay abaalmarin ku saabsan shaqadii uu soo qabtay iyo geesinimadii ku dhalisay in uu naftiisa qatar u geliyo nabada iyo horumarka dadkiisa, asagoo ka soo qayb qaatay sidii Soomaaliya looga saari lahaa ku meel gaarka lagu hayey muddo ka badan 22 sano.
Xafladan lagu sharfayay wasiirka ayaa waxaa lagu qabtay qaacada caanka ah ee Safari Hall, ee ku yaal Minneapolis, isla halkaas oo ahayd meeshii lagu sagootinayey markii hore ee wasiirka Gaashaandhiga loo magacaabay,sannado ka hor. Waqtigaas oo uu Soomaaliya u sii socday iyo hadda, waxaa ka muuqatay is badal weyn. Shaki iyo cabsi badan ayaa ka muuqatay waqtigaas. Haddana waxaa ka muuqatay kalsooni farabadan. Wuxuu qeyb weyn ku lahaa oo uu dhexda uga jiray burburkii ku dhacay Al Shabaabiyo soo celintii nabada Magaala madaxda Muqdishu. Wasiirka wuxuu dadweynaha ka codsaday in wadanka dib loogu soo celiyo maskaxda iyo hantidada Soomaalida qurbo joogta ah, wuxuuna tilmaamay in ay Soomaaliya is badashay oo ay sii fiicnaaneyso maalin walba.
Waxaa xafladaas qabanqaabiyey aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Calan ilaaliyaasha ah, kuwaasoo marwalba u taagnaa inaan Soomaaliya gumeysi ku noqon, Soomaaliduna u tashato dalkeeda iyo danteeda. Aqoonyahanadaas oo intii dawladihii ku meelgaarka ahaa jireen u istaagay inay calanka Soomaaliyeed kor u qaadaan si aduunka oo dhan looga waantoobo in Soomaaliya maxmiyad la galiyo, ayaa waxay isticmaali jireen inay soo dhaweeyaan oo xaflado qadarin ah u sameeyaan qofkii markaas qabta jagada madaxweynaha iyo kan ra'isalwasaaraha. Isu imaatinadaas la abaabulayey iyo dadka Soomaaliyeed ee xafladahaasas ka soo qayb galayey oo calanka lulayey waxay hami weyn galiyeen ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay joogto waxayna niyad jab ku abuurtay dawladihii Soomaaliya dabinka la raadinayey, waayo waxay mar kasta arkayeen inay Soomaalida qurbaha joogta aynan ogolayn u dhiibida calanka Soomaaliyeed dawlad kale.
Waxaa goobta ku sugnaa Generaalo, Cornello, mas’uuliyiin ka tirsanaa dowladihii hore, mas'uuliyiin ka tirsan dawlada hadda jirta iyo dadweyne farabadan oo aad ugu faraxsanaa horumarinta dalkii hooyo.
MPLS, MNName Email Subject Comment 1000 Characters leftAntispam protection